Amaqela kaMicrosoft e-macOS aza kuhlaziywa kwakhona ekupheleni kuka-Agasti ongeze uxinzelelo lwengxolo | Ndisuka mac
IMicrosoft ifuna isixhobo sayo sokunxibelelana seqela kwi-Intanethi ukuba ibe yimbangi eyomeleleyo kwi-FaceTime kunye nezinye kwi-macOS. Ihlaziyiwe kutshanje nge umsebenzi wokwabelana ngomsindo Kwaye kwathiwa ezinye izibuyekezo ziya kuza kungekudala eziza kwenza isixhobo sibe ngcono. Siza kuba nenye yezi zinto zintsha ngo-Agasti walo nyaka kunye umsebenzi wokunciphisa ingxolo esele isebenza kwiWindows ixesha elide.
Inqaku lokucinezelwa kwengxolo lavela kwiMicrosoft Teams ngo-2020 kwi-PC kwaye ngoku izakwazisa abasebenzisi beMac ekupheleni kuka-Agasti. Ngo-Okthobha u-2020, abasebenzisi beWindows kunye neeTe banokukhetha phakathi kwamanqanaba amathathu oxinzelelo lwengxolo besebenzisa ii-algorithms. Eli nqaku lilindelwe kwi-Mac okoko lakhutshwa, kodwa kwabonakala ngathi alisoze lize. Okokugqibela inkampani iyazisile Ekupheleni kwenyanga ka-Agasti Singakonwabela oku kusebenza kwi-Mac.
Uhlengahlengiso oluzenzekelayo luvumela ukupheliswa kwengxolo yangasemva esekwe kwingxolo ebanzi. Ukukhetha ukhetho "oluphantsi" kuya kususa ingxolo engagungqiyo efana nomoya opholileyo. Okokugqibela, sinokukhetha inqanaba "eliphezulu" eliza kususa nayiphi na ingxolo ngaphandle kwentetho yomntu. Ngoku kubonakala ngathi kwi-macOS umsebenzi wokunciphisa ingxolo uya kuba nawo kuphela izenzekelayo kunye nebass kwiMacs kunye neprosesa ye-M1. Indawo ephezulu ayizukufumaneka, kwaye ngokunyanisekileyo, akukho mntu waziyo ukuba kutheni.
Sizakuqala ukukwenza oku ukuphela kuka-Epreli kwaye sinethemba lokugqibezela ukukhutshwa ukuphela kuka-Agasti. Useto oluphezulu alufumaneki kubasebenzisi beMac kunye neprosesa ye-M1.
Kancinci kancinci isicelo senza umsantsa phakathi kwabo bafuna olu hlobo lwezixhobo kunye nohlaziyo ngakumbi abalubonisayo, bhetele kubasebenzisi nakwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Amaqela kaMicrosoft e-macOS aya kuhlaziywa kwakhona ekupheleni kuka-Agasti ongeze uxinzelelo lwengxolo